Khabiirka Kala Duwan: 5 Falanqaynta Suuq-galka Daarajiyadeed ee Sanadka 2017
Xayaysiinta digital'ka ah ayaa badanaa la kulmaan jaangooyooyin go'an iyo isbedelka digital-kadeegaanka. Heerka isbeddelku badanaa wuu socdaa marar badanna marar badan. Taariikhda ganacsiga waxay muujinaysaa in korsashada iyo kobcinta ay yihiin habka kaliyain ay ku noolaadaan jawiga isbaddelka ah ee badanaaba.
sannadka 2016, dijitaalka dijitaalka ah ayaa sii socday si dib loogu qaabeeyo jawiga suuqgeynta. Thekorodhka isbedbeddelka moobiilka ayaa la gaarsiiyey heer, taas oo khasaare u noqon doonta taraafikada. Goobaha sida Pinterest iyo Snapchatayaa sii kordhaya oo si joogto ah u soo jiidanaya dadka isticmaala. Horumarka hadda ayaa lagu muujiyay waxa muwaadiniinta dijital ah ay filayaan.
Iyadoo khibrad u leh la shaqeynta ganacsiyada kala duwan ee yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah,waxaanu isbeddelay isbeddellada kala duwan ee sannadaha soo socda ee la filayo arrimaha cusub iyo in la fududeeyo fursadaha cusub, Lose ama Adapt: ​​ kiiskeena, tanisagoo sheegay inuu run yahay. Sidan oo kale, mar kasta waxaanu diirada saarnaa qaabka ay u tijaabinayaan oo ay u arki doonaan waxa mustaqbalka ah.
Bilowgii rubuckii saddexaad ee 2017, khabiirkii ugu horreeyay ee ka soo jeeda Sare ,Nik Chaykovskiy, ayaa soo koobay liiska isbeddellada ah ee asaasiga ah ee suuq-geynta sayniska si ay uga caawiso xayeysiistayaasha in ay ka fiicnaadaan kuwan horumarineed ee cusub.
1. Moobaylku waa la socodsiinayaa macaamilka hadda jira
Isticmaalka telefanada gacanta ayaa si ballaaran u kordhay sahanka Pew ResearchXaruntu waxay muujinaysaa in 77 boqolkiiba muwaadiniinta Maraykanku haystaan ​​casriga. Tirakoobka sanadkan ayaa muujinaya in telefoonnada casriga ahi ay yihiin macmiilka ugu qiimaha badanlamaanaha aadka loogu jecel yahay.
Smartphone hadda waxay hubin kartaa dib u eegista alaabta, soo-jeedin alaab, iyo ka dhigaysaiibsanaayo gargaarka barta internetka. Qiyaasta qalabkaas oo lagu darayo nolol maalmeedka nolosheena waxay ka dhigeysaa qayb ka mid ah dhaqankayaga.
2. Heerka Live Streaming wuxuu si joogto ah u kiciyaa gawaarida
Sanadkii 2015, Meerkat, oo ah barnaamijka ku saabsan barnaamijka akhristayaasha ah ayaa la bilaabay waxaana uu ahaa niyad jab.Hal sano ka dib, goobaha warbaahinta bulshada ee ugu muhiimsan ayaa laga rogay Facebook, Twitter, Instagram, iyo YouTube.
Live streaming waxay bixisaa badeecado iyo suuqyadee gees ah tartan kalemashaariicda tan iyo markii ay kobciso waayo-aragnimada macaamiisha. Si fiican u qaabeysan oo sheekeysiga noloshiisa ayaa suurageliya in ay calaamad u noqoto mid caqli-gal ah isla markaana u sahlanaatoisdhexgalka oo aan marnaba la bixin.
3. Xogta Weyn ee Karti-galinta
Warbixin aad u weyn ayaa ah fure u ah kor u qaadista waayo-aragnimada isticmaale ahaaneed. Amazon,Spotify, iyo Netflix waa tusaalooyin shirkado waaweyn oo wax ku ool u ah xogta weyn iyada oo ujeedadu tahay in la siiyo dadka isticmaala heer sareshakhsi ahaaneed. Kordhinta xogta waxay u sahlaysaa calaamad si loo sameeyo saadaalinta iyo bartilmaameedyada ka dhasha tirada dadka isticmaala.
4. Gaadiidka suuqgeynta waa ka badan yahay
Inta badan suuqyadeyaal waxay tixgeliyaan suuq-geynta suuq-geynta suuqa oo muhiim ahelement of guusha. Qalabaynta ayaa hadda loo adeegsadaa si loo fududeeyo dhinacyada suuq-geynta suuq-geynta.
5. Xayeysiinta Dhexdhexaadinta Waxay Bixineysaa Suuqgeynta Macluumaadka
Suuq-geynta mowqifka ayaa abuuray saldhig u ah ereyo xun oo wanaagsan. Waa weynmugga xogta hadda jira waxay ku khasabtey in ay noqoto mid isbeddeleyaal ah si loola tacaalo siyaabooyin wanaagsan oo loogu talagalay inay dhagaystaan ​​dhagaystayaashooda iyo istaraatijiyadaha naqshadeynta si ay ugu galaan dadka isticmaalakhibrado kala duwan.
Fikradaha kama dambaysta ah
Hawlaha ugu caansan, weyn ama yaryar ayaa lagu qasbaa in ay kobcaan oo ay ku guulaystaanxeelado cusub oo lagu hubinayo in la sii wadi karo. Diirada saarista isbeddelada kor ku xusan iyo isdhexgalka ayaa ah talaabo weyn oo loo qaado furitaankafursadaha suuqyada kala duwan Source .